गणितमा एमए, शिक्षक, सफल किसान, मासिक कमाइ दुईलाख | NepaleKhabar.com
गणितमा एमए, शिक्षक, सफल किसान, मासिक कमाइ दुईलाख
October 11, 2020 | 8:52 pm
केदार तिमल्सिना / काभ्रे, असोज २५ गते । गणित विषयमा स्नातकोत्तर बनेपाका प्रकाश तिमल्सिनाको परिचय केही वर्षअघिसम्म एक शिक्षक र सहकारीकर्मी थियो । तर अहिले उहाँको परिचय फेरिएको छ, सफल कृषक र उद्यमीका रुपमा । त्यस अर्थमा उहाँको दिनचर्या अन्य युवाको भन्दा फरक छ ।
पैँतीस वर्षीय प्रकाशका दिन बिहान ५ बजे उठेदेखि आफूले पालेका भैँसीको स्याहारसुसारमै बित्ने गरेको छ । वि. सं. २०७२ मा बनेपा नगरपालिका–५, घोकेचौरमा उहाँले स्थापना गर्नुभएको भैँसीफार्ममा अहिले २३ वटा भैँसी तथा पाडापाडी छन् ।
उहाँले पाँच लाख रुपियाँबाट सुरु गरेको भैँसीपालन व्यवसायमा अहिले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । निजी इन्ष्टिच्युटमा अतिरिक्त कक्षा पढाउँदा मासिक ७० हजारसम्म कमाएको र सहकारीमा काम गर्दा पनि राम्रो तलब लिने तिमल्सिना दीर्घकालीन पेशाको रुपमा भैँसीपालनमा लागेको बताउनुहुन्छ । उहाँको फार्ममा आफूसहित बुबा, आमा, दाजु, भाउजू र श्रीमती गरी छ जना दैनिक रुपमा भैँसीको रेखदेख तथा काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय बन्द भएपछि छोराछोरीसमेतले उहाँहरुको काममा सघाउने गरेका छन् ।
तिमल्सिनाको फार्मबाट औसत दैनिक १५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । उहाँले दैनिक २० लिटर दूध घरबाटै बिक्री गर्नुहुन्छ भने अरु बनेपाका दुई वटा डेरीमा बिक्री गर्नुहन्छ । आफू्ले उत्पादन गरेको दूध प्रतिलिटर ११० रुपिँयामा बिक्री गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले व्यवसाय चलाउनका लागि बनेपामा रहेको प्राइम कमर्सियल बैङ्कबाट ऋण लिएको बताउनुभयो । आगामी दिनमा भैँसीको सङ्ख्या बढाएर ५० वटा बनाउने तिमल्सिनाको योजना छ । तिमल्सिनाले दुध बिक्रीबाट वार्षिक झण्डै ६० लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको र खर्च कटाएर वार्षिक ३० देखि ३५ लाख रुपियाँ बचत हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा वार्षिक एक हजार किलो गोबरलाई प्रशोधन गरी कम्पोष्ट मल बनाउनका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थासँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो । फार्ममा एक लाखदेखि दुई लाख २५ हजार रुपिँयासम्मको भैँसी पालिएका छन् । भैँसीका लागि चाहिने आहारा काभ्रे, चितवन, झापालगायत जिल्लाबाट ल्याउने गरेको उहाँले बताउनभयो । दीर्घकालीन सोच राखेर काम गरेको खण्डमा व्यवसाय सफल हुने उहाँको भनाइ छ ।